သတင်း - SSIC
နောက်ဆုံးရ သတင်းများ ရယူလိုပါက . . .
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဦးဆောင်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား ကို ၁၈-၆-၂၀၂၁ ရက် နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ကျော်ထွန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပအို့ဝ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့များ၊ စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူများ စုစုပေါင်း (၆၆) ဦး ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ကျော်ထွန်းမှ အဖွင့်မှာစကားပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ရရှိနိုင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်း၊…
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (2/၂၀၂1) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (2/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၂1 နှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးသို့ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ‌ ကျော်ထွန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင် (၅)ဦး တက် ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ခမ်းဓနကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ ပြောင်းအခြောက်ခံသန့်စင် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကို အတည်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပမာဏစုစုပေါင်းမှာ မြန်မာကျပ် (၆၆၇.၁) သန်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း (၉) ဦး ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Bing Industries Limited သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် Ethyl Alchol (အီသနော) ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သော Bing Industries Limited သို့ (၄-၆-၂၀၂၁) ရက်တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
Shan State (South/East) Cooperative Limited သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ဦးပိုင်အမှတ်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ် (၅-က)၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ အေးသာယာမြို့သစ်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆေးရုံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Shan State (South/East) Cooperative Limited သို့ (၂၆-၅-၂၀၂၁) ရက်တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရှမ်းပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့်အဖွဲ့သည် ၁၄-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ရှမ်းပြည် နယ်ဦးစီးမှူးရုံးအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များမှာကြားပြီး နောက် ရှမ်းပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ ဥက္ကဌ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာကျော်ထွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ရမည့်ကိစ္စရပ်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)ကို ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့ တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ် ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကျော်ထွန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ကြပြီး ဥက္ကဋ္ဌက ပြည်နယ် အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုစီးဝင် လုပ်ကိုင်လာကြရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်ကော်မတီလက်ထက်တွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကြန့်ကြာနေသည့် မပြီးပြတ်သေးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကိုလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ အမိန့်ကြော်ငြာစာများနှင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဦးစားပေးကဏ္ဍပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း များ၊ Covid-19 ကာလ ဦးစားပေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းပါ ဦးစားပေးကဏ္ဍများနှင့် ယခုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ တာဝန်ယူ သည့်ကာလအတွင်း အကျိုးရရှိမည့် Quit Win လုပ်ငန်းများကိုလည်း ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး မြန်မြန် ဆန်ဆန်ခွင့်ပြု ပေးသွားရန် ကော်မတီဝင်များက ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန်ကိုလည်း တိုက်တွန်း လိုပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် After Care…
Wuxi HuaGuang (Myanmar) Company Limited .(China)နှင့် Dragon Cement Co., Ltd. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Wuxi HuaGuang (Myanmar) Company Limited ၏ တီကျစ် ကျောက်မီးသွေးသုံး ရေနွေးငွေ့ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအား အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဘွိုင်လာအသစ် တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် Dragon Cement Co., Ltd.၏ ဘိလပ်မြေ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း တို့ကို ၂၂-၁-၂၀၂၁ ရက်တွင် သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
” စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားခြင်း “
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ဦးဆောင်၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ အခွင့်အလမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများမှ တာဝန်ရှိသူ များမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လိုပါက http://bit.ly/3nREX1p တွင် ဝင်ရောက်၍ စာရင်းပေးသွင်း၍ တက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၁- ၆၅၈၁၃၂…
“ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား? SSIC website တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။”
SSIC website သည် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ထိရောက်သောသတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်သည့် website တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း website တွင် အစိုးရ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်းအင်းများ နှင့်ပတ်သတ်သော နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ခွင့်ပြုချက်၊ သို့မဟုတ် ထောက်ခံချက်များရရှိထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန် တစ်ခုလည်းရှိပါသည်။ ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဖော်ပြပါ Website တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ – https://www.ssic.gov.mm/ #CheckouttheSSICWebsite
“ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း (SSIPP) ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အား Online Video Conferencing ပြုလုပ်၍ လူထုသို့ ဖြန့်ဝေခြင်း”
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် Online စနစ် ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (SSIC)၏ (၂၀၂၀–၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အား လူထုသို့ အသိပေးဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စီမံ/ဘဏ္ဍာ‌ရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏အတွင်းရေးမှူး၊ DICA ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးလေးနိုင်မှ အသေးစိတ်ရှင်းလင်း‌‌‌‌တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော သတင်းမီဒီယာများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ မေးမြန်းသောမေးခွန်းများအား သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေး ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း (SSIPP)ကို ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (SSIC) မှ မတ်လ ၂၀၂၀ တွင် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး (၂၀၂၀-၂၀၂၁) အတွက် နှစ်စဥ်လုပ်ငန်းစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်းအား ဇွန်လ…
Meung Thauk Company Limite နှင့် Unique Lawksawk Mango Public Company Limited သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရပ်စောက် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Meung Thauk Company Limite ၏ သက်ရက်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် Unique Lawksawk Mango Public Company Limited ၏ သက်ရက်သီး သန့်စင်ထုတ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း တို့ကို ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
GPS Joint Venture Co., Ltd သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် တပင်ပျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာငံမြို့နယ်၊ တောင်ကြီး ခရိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် GPS Joint Venture Co., Ltd ၏ ခဲသတ္တုသန့်စင် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းအား စီးပွားဖြစ်စတင်သောရက် သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား ၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ရက်တွင် သွားရောက်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၂/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၂/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစည်းအဝေးခန်းမ (၁)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ကော်အတီဝင်များဖြစ်သည့် ရှမ်းပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး၊ ရှမ်းပြည်နယ် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးနေလင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်(၄)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးမှ ရာခိုင်းနှုန်းပြည့်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ (၄)ခု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ကျပ်သန်း ၁၅၁၀၀(US$ ၄.၃၄၉ သန်း အပါအဝင်)နှင့် ဖက်စပ်နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ (၁)ခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ (US$ ၁.၃၉ သန်း) စုစုပေါင်း လုပ်ငန်း(၅)ခုကို ခွင့်ပြုခဲ့ရာ အဆိုပါလုပ်ငန်းများမှ ပြည်တွင်လုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း (၄၂၀)ကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အတည်ပြုမိန့် ပြန်လည်အပ်နှံခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာသော လုပ်ငန်း(၁)ခုအား အတည်ပြုမိန့်ပြန်လည်အပ်နှံခွင့်ပြုရန်…
Poly-tunnels သည်သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊အထွက်နှုန်းတိုးတက်စေခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုး ရာသီကာလ တိုးချဲ့နိုင်စေခြင်းများအတွက် ရိုးရှင်းသော တည်ဆောက်မှုပုံစံဖြစ်ပါသည်။Fresh Studio သည်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုတ်လုပ်မှုတွင်poly-tunnel များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရရှိလာနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကို ဂျာမနီအစိုးရကိုယ်စားGIZBusiness မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။ဤWebinar တွင် Fresh Studio သည်လေ့လာတွေ့ရှိမှု၏အဓိကကျသောအချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးနောက် အမေးအဖြေများဖြင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍သင်စိတ်ဝင်စားပါက၊အောက်ပါလင့်ခ်မှာ စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ https://ssic.gov.mm///bit.ly/GIZPolytunnelWebinar ရက်စွဲ: ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ အချိန်: နေ့လည် ၁ နာရီ -နေ့လည် ၃ နာရီ နေရာ: အွန်လိုင်းအသုံးပြု၍Zoom မှတဆင့်ကျင်းပသွားမည်
Model Industrial Co., Ltd. သို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဘရိုက်တီးကျောက်မှုန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Model Industrial Co., Ltd. ၏ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရွာငံမြို့နယ်၊ ကျောက်ငှက်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဘရိုက်တီးကျောက် အသေးစားထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသို့ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၉.၉.၂၀၂၀ ရက်တွင်သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
HI AVOCADO MTD COMPANY LIMITED သို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် ထောပတ်သီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထောပတ်သီး၊ သရက်သီး စသည်တို့ကို ပြုပြင်ထုတ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော HI AVOCADO MTD COMPANY LIMITED သို့ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၂.၉.၂၀၂၀ ရက်တွင်သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(SSSCCI)မှ ဦးဆောင်၍ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် “Taunggyi Smart Green City Project Initiative” အခမ်းအနားသို့ DICA (Shan State)မှ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး တက်ရောက်၍ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကို ၁.၉.၂၀၂၀ရက်တွင် (SSSCCI)ရုံး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စား လှယ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Allance One Myanmar Co., Ltd. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆေးရွက်ကြီးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ Allance One Myanmar Co., Ltd. သို့ ၁၂.၈.၂၀၂၀ ရက်တွင် သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (၁/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးသို့ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် အဖွဲ့ဝင် (၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ထောပတ်သီး စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ထောပတ်သီး၊ သရက်သီးအစရှိသည့်သီးနှံများပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ သရက်သီးသန့်စင်ထုတ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို အတည်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။အထက်ပါလုပ်ငန်းများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏစုစုပေါင်းမှာ မြန်မာကျပ် (၅၆၇၂.၉၉) သန်းနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄.၁၃) သန်းရှိပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းမှ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း (၁၂၀) ဦး ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း၏ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း၏ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း အကောင် အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဂျာမဏီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ ၂၃.၆.၂၀၂၀ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၌ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
စွမ်းအားသစ် အိုအေစစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိ စွမ်းအားသစ် အိုအေစစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေမှုအား ၁၉.၆.၂၀၂၀ရက်တွင် သွားရောက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Asia Green Travels & Tours Company Limited သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ မိုင်းသောက်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ Asia Green Travels & Tours Company Limited ၏ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (၂)ခုအား ၁၇.၆.၂၀၂၀ ရက်တွင် သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Thazin Garden International Trading Co., Ltd ၊ Myanmar Treasure Hotel နှင့် Resort Group Co., Ltd Minor Myanmar Co., Ltd များသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းသောက်ဒေသရှိ Thazin Garden International Trading Co., Ltd ၊ Myanmar Treasure Hotel and Resort Group Co., Ltd Minor Myanmar Co., Ltd တို့၏ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၉.၆.၂၀၂၀ ရက်တွင် သွားရောက်ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၂၀) https://www.ssic.gov.mm/wp-content/uploads/2020/05/igm_notification_20200407.pdf
Field Inspection to Eden Hotels and Resorts Co., Ltd , Myanmar Belle Shin Shin Foods Co.,Ltd and Myanmar Belle Shin Shin Foods Co.,Ltd
Shan State Monitoring Team conducted field inspection on Eden Hotels and Resorts Co., Ltd , Myanmar Belle Shin Shin Foods Co.,Ltd and Fresco Myanmar Co., Ltd(Italy) located at Heho and Aye Thar Townships , southern Shan State, which carrying out under Myanmar Investment Commission Permits on 24th March, 2020. The Team discussed and coordinated the…
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း (SSIPP) ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီနှင့် ဂျာမဏီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (GIZ) တို့ပူးပေါင်း၍ ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တောင်ကြီးစီးတီးဟိုတယ်၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း (SSIPP) ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် သတင်းမီဒီယာများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဗီဒီရို ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဗီဒီရိုကို ဂျာမနီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ အကူအညီဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ယခုဗီဒီရိုထဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်၏ သဘာဝပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အလားအလာရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် ခံစားခွင့်များ၊ ကင်းလွှတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များပါဝင်ပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ် ၂၀၁၉တွင် ယခုဗီဒီရိုကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ဗီဒီရိုအားကူးယူရန် https://youtu.be/wkuSYs-gG4c
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း (SSIPP) သည် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် မြှင့်တင်ရန်အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ အဓိကလမ်းပြမြေပုံကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါမည်။ ရှမ်းပြည်နယ်၏လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေများအားဖော်ပြထားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်း ကျင်တိုးတက်လာစေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုနှံမှုပြုလုပ်နိုင်မည့် ထိပ်တန်းနေရာများအနက်တစ်ခု အဖြစ် ပါဝင်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရည်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့် မဟာဗျူဟာ များအား SSIPP တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ SSIPP သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း ဒေသများမှ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပါဝင်မှုဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း၏ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း (SSIPP) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်တာအချိန်ကာလ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သေးစိတ်အချက်အလက်များ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းအား ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ website တွင်…
မြတ်မင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ဆန်တမ်အင်းလေး ရီဆော့ ကုမ္ပဏီလီမိတက်. နှင့် ဝင်း ဟိုတယ်နှင့် အပန်းဖြေလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မြတ်မင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ဆန်တမ်အင်းလေး ရီဆော့ ကုမ္ပဏီလီမိတက်. နှင့် ဝင်း ဟိုတယ်နှင့် အပန်းဖြေလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ တို့၏ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား ၂၅.၂.၂၀၂၀ ရက်တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
ပါရာဒိုင်ဆို စီနီမား(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် အောင်ပန်းမြို့တွင် ရုပ်ရှင်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပြသခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ပါရာဒိုင်ဆို စီနီမား(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် သို့ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သည့် ကွင်းဆင်းအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ပင်လောင်း မြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော Loi Moung Co., Ltd. သို့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၏ ကားရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်လှစ်ခြင်း
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ကားရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၅၀’x ၂၀’) ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များဖြင့် (၂၇.၁၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၌ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ် ၂၀၁၉ ကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီတို့မှ ပူးပေါင်း၍ Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ၏ ပါဝင်ကူညီမှုဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ မြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ရှိ Royal Taunggyi Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖိုရမ်အခမ်းအနားသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးသောင်းထွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Thomas Neisinger ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် ပြည်ပသံရုံးများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများ၊ ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖိုရမ်သို့ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ သြစတေးလျ နိုင်ငံ၊ ရုရှနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူ ၉၂ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင် ဖိုရမ်နှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပြခန်းများလည်း ခင်းကျဉ်းပြသခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဂျာမနီ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Thomas Neisinger တို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး၊ အဖွင့် အမှာစကားများ အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထွန်းမှ အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် “မြန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရေး အတွက် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံစေရန်နှင့် အားလုံးပါဝင်သည့်…
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး)၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံးဖွင့်လှစ်ခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာန (ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး)ကို ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ဒေသတွင်းစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်၊ ရှမ်းပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်၊ ဦးအောင်နိုင်ဦးတို့မှ (၁၈.၈.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၇)ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၄/၂၀၁၇)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ ပြီးကော်မတီအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း(၅)ခုနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း(၃)ခုစုစုပေါင်း (၈)ခုကိုစိစစ်၍ အတည်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းပေါင်း (၅၀၀)ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ဒေသတွင်းလူမှု စီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး ဂျာမဏီအပြည်ပြည် ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ အကူအညီဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ မှ စတင်၍ ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (အက်စ်အက်စ်အိုင်စီ) သည်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုချက်များထုတ်ပေးသောအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။
အဝေရာမီးပုံးပျံကွင်းလမ်း၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။